Cristiano Ronaldo Oo Shaaciyay Go'ankiisa Kooxda Juventus
Home Wararka Ciyaaraha Cristiano Ronaldo oo Shaaciyay go’ankiisa kooxda Juventus
Cristiano Ronaldo oo Shaaciyay go’ankiisa kooxda Juventus
Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu go’aansaday inuu sii joogo Juventus xilli ciyaareedka 2021-22, taasoo u muuqata inay soo afjarayso hadal heyntii mustaqbalkiisa.
36 jirkaan oo galaya sanadkii ugu dambeeyay qandaraaskiisa ayaa lala xiriirinayay inuu xagaaga ka tagayo kooxda Paris Saint-Germain iyadoo kooxdiisii ​​hore ee Manchester United la rumeysan yahay inay isha ku heyso xaaladiisa.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport , Ronaldo wuxuu jeclaan lahaa inuu sii joogo Turin ugu yaraan hal xilli ciyaareed oo dheeri ah, ka hor inta uusan culeys saarin xulashadiisa xagaaga dambe.
Juve waa mid ka mid ah naadiyada badan ee dhibaatada dhaqaale ka soo gaadhay intii uu socday cudurka coronavirus, waxayna raadinayaan inay yareeyaan mushaarkooda.
Ronaldo ayaa haatan qaadanaya 46.7m sanadkiiba inkasta oo bixitaankiisu wax weyn ka tari doono culayska dhaqaale ee haysta kooxda ka dhisan Serie A, haddana waxay weli rajaynayaan inay kala xaajoodaan heshiisyo ay ku kordhinayaan qandaraaska.
Tan iyo markii uu kaga soo biiray Real Madrid sanadkii 2018, Ronaldo ayaa 133 kulan u saftay kooxda Juventus isaga oo u dhaliyay 101 gool sidoo kale caawiye ka noqday 22 kale.
Previous articleReal Madrid oo soo bandhigtay David Alaba una dhiibtay Numberka uu Xiran jiray Daaficii..
Next articleWararka Suuqa kala iibsiga Caawa: Manchester City oo ku biirtay tartanka Federico Chiesa, Liverpool oo raadineysa Jarrod Bowen iyo Qodobo kale